Romafo 13 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Romafo 13 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Ɛsɛ sɛ obiara brɛ ne ho ase ma tumi a ɛwɔ ɔman no mu, efisɛ, tumi biara nni hɔ a emfi Onyankopɔn pɛ mu. Tumi biara a ɛwɔ hɔ no fi Onyankopɔn. 2 Obiara a ɔne tumi a ɛwɔ hɔ no di asi no, tia nea Onyankopɔn ahyehyɛ. Na obiara a ɔbɛyɛ saa no de atemmu ba n’ankasa ara so. 3 Wɔn a wɔyɛ papa no nsuro atumfo na mmom wɔn a wɔyɛ amumɔyɛ no na wosuro atumfo. Wopɛ sɛ woyɛ obi a nea tumi wɔ ne nsam no suro wo anaa? Ɛnne di asɛm pa na wɔbɛkamfo wo. 4 Efisɛ, ɔyɛ Onyankopɔn somfo a wo yiyedi mu nti na ɔyɛ adwuma. Na sɛ woyɛ bɔne a, suro no efisɛ, ne tumi a ɔde twe aso no da hɔ fann. Ɔyɛ Onyankopɔn somfo enti ɔnam Onyankopɔn abufuw so twe wɔn a wɔyɛ bɔne no aso. 5 Esiane saa nti, ɛsɛ sɛ wobrɛ wo ho ase ma tumi a ɛnyɛ sɛ Onyankopɔn abufuw no nti, na mmom, esiane onim a wunim sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no nti.
NA-TWI : Romafo 13